Iifonti ezintlanu ezahlukeneyo zikaGoogle kunye nokuba abasebenzisi babo bacinga ntoni ngokuchwetheza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti ezintlanu ezahlukeneyo zikaGoogle kunye nokuba abasebenzisi babo bacinga ntoni ngohlobo lochwethezo
Ewe kuyinyani oko Imigca ye Google iyenza into yayo xa ifuna ukutsala abasebenzisi ngeefonti ezahlukeneyo, kodwa ngeli xesha iyenza ngokuprintwa okunomdla nokonwaba okuthandwa ngumntu wonke, nangona inyani kukuba uninzi lweefonti enazo zahlukile kwaye ngamanye amaxesha kunzima ukufumana into Isidima phakathi kweentlobo ezininzi.
Kule nkqubo yokudibanisa siyenzela wena umsebenzi kwaye sikubonisa eyethu Iifonti ezi-5 ozithandayo ezivela kwiifonti zikaGoogle, Qhubeka wazi ukuba siyavumelana nawe.
2 Elite ekhethekileyo
4 Umdlalo wokudlala
Uhlobo lochazo oza kulusebenzisa ngoonobumba abakhulu, nabanye abalinganiswa bokuyila kakhulu. Ukubetha ngokungalawulekiyo apho ubukhulu buguquke khona kuyo nganye, kuyinika umoya owahlukileyo kunye noqobo, olungele ukuqaqambisa umyalezo kwiposta okanye kwintloko yewebhusayithi.
Ibali ngokwalo malunga nale ndawo idumileyo kukuphefumlelwa kweBarrio evela kwiivenkile ezincinci zevenkile, iivenkile zevenkile, ukutya okuphekwe ekhaya, abaxheli belali kunye nabathengisi beengca, kunye nokunikezelwa okuzenzekelayo komthengisi okhohlakeleyo. Umyili wayo yayinguSergio Jiménez kunye noPablo Cosgaya.
Ingumxholo onesimbo sokubhala soomatshini bokuchwetheza. Ngale ndlela nganye yeempawu zayo ibonakala ngathi iphuma kumaqhosha, ikunika a umoya weediliya kwaye kwangaxeshanye okwangoku.
Ukusuka koku kunzima kakhulu ukufumana ibali lendalo yayo kunye nokuphefumlelwa kombhali, kodwa into elungileyo kakhulu engacacanga, kukuba ungayifumana kwiwebhu ngaphandle kwengxaki
Luhlobo lohlobo olufana nalo "Indawo yokuhlala rhoqo"Kuba ndiyazi isebenza ngomeyiúizikali.
Ngomoya wokuyila kunye nokungakhathali ilungele i-láyam okanye ukutsala umdlaón Ngexesha elithile kwi-portal yewebhu kwaye kukungahambi kakuhle koonobumba bayo okwenza ukuba kube namandla kakhulu. IBahiana yifonti yasimahla eyilwe nguPablo Cosgaya kunye noDani Rascovsky ngo-2013.
Ubume bayo bulungele izihloko ezixineneyo kunye nemibhalo emifutshane, inika ii-glyphs ezingama-490 kunye nenkqubo yayo ye-OpenType ethintela imiqondiso ekuphindaphindweni xa kubhalwa. Ixhasa iilwimi ezingaphezu kwe-100!
Kule meko sijamelene nohlobo lochwetheza olunomoya onjengomntwana, olwenza ukuba ulungele nawuphi na umxholo onxulumene nesi sihloko.
Nangona kunjalo, ubuntwana abuthinteli kubuzaza okanye kubunzulu bomyalezo ozama ukuchazwa nguKranky, nokuba kunjalo, ayijoliswanga kule ndawo kuphela, kodwa isitayile sayo esenziwe ngesandla senza ukuba ibe bhetyebhetye.
Oku kunokwenzeka i umbonoónmáziyafana nezinye esele sithethile ngayo kweli nqaku kwaye ilungele isitayile "Ukuhambisa iileta"Iyaqhubeka ukuba ngumkhwa kwi-2017. Ngale ndlela lukhetho olufanelekileyo kwiwebhu, kuba abantu abaninzi baqinisekile ukudlula kuloo mizuzu yokubhala kunye nenkuthazo.
Ukuqukumbela, siza kuyibona indlela ekumnandi ngayo ukubanika oko ukuchukumisa okukodwa okwahlukileyo kwizicatshulwa zethu.
Ineentsapho ezingaphezu kwama-600 zeefonti kwaye zilungele ukufundwa kwizikrini zeblogi kunye namaphepha ewebhu ngokubanzi, njengemithombo evulekileyo yemithombo uGoogle ayibeka ezandleni zethu, ubukhulu becala ezandleni ze isifoñndiyakuthanda gráficos kunye neebhlog.
Kwiminyaka eyadlulayo oku bekungenakwenzeka njengoko kuye kwafuneka ukuba kuthintelwe iifonti emiselweyo njenge I-Arial, iTimes New Roman, iGeorgia okanye iiComic Sans. Kulula kakhulu ukuzisebenzisa, kuba unokuzikhuphela kwikhompyuter yakho okanye uzingenise ngokuthe ngqo kwiphepha eliphambili leeFonti zikaGoogle. Yonke into ngumba wokuthanda kwabasebenzisi!
Sukukholelwa kuloo nto Inkqubo yokukhetha ifontiía Ilula, kuba phakathi kwabaninzi kunokuba ngumceli mngeni kuye nabani na, kodwa nangona kunjalo, inye kuphela into abanayo ngokufanayo, kwaye kukuba bafuna ukunxibelelana ngombono okanye ukuhambisa umyalezo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iifonti ezintlanu ezahlukeneyo zikaGoogle kunye nokuba abasebenzisi babo bacinga ntoni ngohlobo lochwethezo
UPablo Cosgaya sitsho
Enkosi ngokufaka iBahiana kunye neBarrio kwinqaku lakho. Ndithatha eli thuba lokwabelana ngeendaba: ngoku ungonwabela inguqulelo entsha yeefonti zombini, ngoku ngecala eliphantsi. Njengesiqhelo, ilayisenisi yokusetyenziswa simahla nangokuvulekileyo, nkqu nakwiiprojekthi zorhwebo. Banokukhutshelwa apha: goo.gl/0aIFF1
Phendula Pablo Cosgaya
Yintoni entsha kwiifonti zikaGoogle: Ngoku ungadibanisa iifonti kumaxwebhu akho!